"ए मेरो हजुर २" हेर्न आएकी झरना को गोपी कृष्ण हलमा रुवाबासी – An Online Entertainment News Portal
HomeEntertainment“ए मेरो हजुर २” हेर्न आएकी झरना को गोपी कृष्ण हलमा रुवाबासी
September 1, 2017 Keshab Khadka Entertainment, Kollywood, News 0
यिनी हुन स्थाइ घर सिन्धुपाल्चोक भई हाल कपन बस्दै आईरहेकी सरिता श्रेष्ठ । उनको वास्तविक नाम सरिता भएपनी उनिलाई सबैले “झरना” भनेर नै चिन्छन रे । चलचित्र “ए मेरो हजुर २” आजबाट अल नेपाल प्रदर्शनमा आएको छ । सोही क्रममा दर्शकहरुको प्रतिकृया लिन बिहानै गोपीकृष्ण हलमा पुगेकी नायीका तथा निर्देशक झरना थापा लाई के थाहा त्यहा यि अर्की सानी झरना भेटिन्छिन भनेर । आठ बर्षको उमेर देखी नायीका झरना थापाको चलचित्र हेर्न थालेकी झरना अर्थात सरितालाई के थाहा जसको हरेक चलचित्र हेरिन, जसको दुइअोटा एल्बम भरी फोटो सजाएर दराजमा राखेकी छिन उनी सङ्गै अकस्मात भेट हुन्छ भनेर । १० कक्षामा अध्ययन गर्दै गरेकी सरिता झरनालाई यतिसम्म मन पराउदी रहिछिन कि उनको यो आसुँले नै बाताईरहेको थियो । झरनालाई देख्नेबित्तिकै अङ्गालोमा कसेर रुन थालिन । झरनाले के भयो बाबा भनिन उनी बोल्न थालिन तर बोली फुट्न कहाँ सक्यो र ? डाँको छोडेर रुन थालिन । बार बार उनी झरनालाई अंकमाल गरिरहेकी थिईन । केही भन्न खोजिराखेकी थिईन तर उनको बोली अड्कन्थ्यो अनी रुन थाल्थीन । उनको आँखामा आसुँ देखेर झरनाको पनि आँखा रसायो उनी सँगै आएकी साथी पनि रुन थालिन झरना सम्झाउदै थिईन नरोउ भनेर । दर्शकको भिडमा च्यापिएरै सही उनी झरनालाई नै खोजिरहेकी थिईन । उनका आँखा बोलिरहेका थि, हात बेकाबु थियो, मन खुशी थियो, शायद यता उता जसरी हुन्छ उनी झरनालाई नै खोजिरहिन । उनलाई नै पछ्याईरहिन । मलाई उत्सुक्ता भयो । केही सोध्न थाले, प्रश्न गर्दै थिए उता दर्शक सँग फोटो खिचिरहेकी झरना अली पर जान लागेकी थिईन उनको आँखा अगाडि थिईनन उनी हतासमा झरनालाई खोज्न थालिन । उनलाई देखिन अनी फेरी बोल्न थालिन । माया सबैले गर्छन् तर झरना प्रती यि सानी झरनाले गरेको माया हेरेर आँखा नरसाउने कमै हुन्छन । हामी सँगै कुरा गर्दै जादा उनले भनिन “म सरकारी स्कुलमा पढ्छु, कम्प्युटर चलाऊन आउँदैन अनी साथीलाई भनेर साइबर गएर झरनाको फोटो हेर्छु” । कतै झरनाको सि डि देखे भने नहेरेको फिल्म रहेछ भने सि डि किनिहाल्छु । युट्युबहरुमा हेर्न म सँग मोबाईल छैन । उनको यो कुरा सुनिरहदा हामी पनि निकै भाबुक भयौ । लगभक दर्शकहरु बाहिरी सकेका थिए उनले झरनालाई फोन नम्बर दिन भनिन फेरी एकै छीन पर्खिनु है भनिन। किन भन्दा अरुले देख्छन, मलाई दिनुभयो भने अरुलाइ नि दिनुपर्छ तपाईंलाई डिस्टर्ब हुन्छ फेरी । म बुझ्छु नि । बरु कहिलेकाही फोन गर्छु म सँग बोलिदिनु है ? उनले यो भनिरहदा नायीका/निर्देशक झरना थापाका आँखामा टिलपिल टिलपिल आसुँ छचल्किरहेका थिए तर झार्न सकिनन । उनको यो चाह, यो माया देखेर झरना पनि भाबुक बनिन । सबै दर्शक निस्किसकेका थिए झरना माथि अफिस तिर जान लागिन तर ति सानी झरना फिल्म हेर्न छोडेर झरना तिर टोलाई रहिन सायद मन मनै झरनालाई बोलाइरहिन । कसैले कसैलाई यती धेरै किन चाहन्छ ? यती धेरै माया कसरी गर्छ ? यतिधेरै सम्मान कसरी गर्न सक्छ ?
‘मिस्टर झोले’ को ‘ओखती’ (भिडियो सहित)